မျက်နှာဖုံး Mask များသန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ရာ တွင် ဓါတ်ဆီသုံး သင့်ကြောင်း ဖိလစ်ပိုင် ဒူတာတီး ပြော၊ ဆေးပညာရှင်များ လက်မခံ – Na Pann San
မျက်နှာဖုံး Mask များသန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ရာ တွင် ဓါတ်ဆီသုံး သင့်ကြောင်း ဖိလစ်ပိုင် ဒူတာတီး ပြော၊ ဆေးပညာရှင်များ လက်မခံ
Na Pann San W | August 2, 2020 | International News | No Comments
မျက်နှာဖုံး Mask များသန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ရာ တွင် ဓါတ်ဆီသုံး သင့်ကြောင်း ဖိလစ်ပိုင် ဒူတာတီး အကြံပြု။ ရယ်စရာပြော တာ မဟုတ်ဟု လည်းဆို။ ဆေးပညာကျွမ်းကျင်သူ တို့ သဘော မတူ ။ ဓါတ်ဆီနှင့် ဒီဇယ်ဆီ တို့မှာ ပိုးသတ်ရာ တွင် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း မရှိ ။
သြဂုတ် – ဝ၂ ၊ ၂ဝ၂ဝ
ဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူတို့ အနေဖြင့် ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ရေး Mask မျက်နှာဖုံးများ ကို ပိုးသတ်ရာ တွင် ဓါတ်ဆီ ကို အသုံးပြု သင့်ကြောင်း သမ္မတရိုဒရီဂို ဒူတာတီးက ဘွင်းဘွင်းကြီး တိုက်တွန်း လိုက်ပြီး ရယ်စရာပြောနေခြင်း မဟုတ်ကြောင်း ကိုလည်း အလေးအနက် ပြောဆိုသည် ဟု Reuters က ယနေ့ရေး သားသည်။
မျက်နှာဖုံးများ ကို သန့်ရှင်းရေးပြု လုပ်ရာတွင် ပိုးသတ်ဆေး အလွယ်တကူ မရရှိပါက ဓါတ်ဆီအသုံးပြုသင့်ကြောင်း လွန်ခဲ့ သည့် ရက်သတ္တပတ် ၌ သမ္မတ ဒူတာတီးက ပြောဆိုခဲ့ဖူးသည်။ သမ္မတ၏ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူကမူ ဒူတာတီးအနေဖြင့် ရယ်စရာပြောခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သမ္မကြီးမှာ မကြာခဏ ပြက်လုံးထုတ်လေ့ရှိသည်ကို အများသိဖြစ်ကြောင်း ချေပပြောဆို ခဲ့သည် ။
သောကြာနေ့ ရုပ်သံ မှ တစ်ဆင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားရာ တွင်မူ သမ္မတဒူတာတီးက “ ကျွန်တော် တကယ်ပြော တာပါ ၊ ဓါတ်ဆီဆိုင် ကို သွား၊ ဓါတ်ဆီနည်းနည်း ၀ယ်၊ မျက်နှာဖုံးတွေ အတွက် ပိုးသတ်ဆေး ရပါပြီ “ ဟု ပြောဆိုပြီး “ ရယ်စရာပြောနေ တယ် ထင်ကြလား၊ တကယ်ပြောတာပါ ၊ ရယ်စရာ လုပ်ထာ မဟုတ်ပါဘူး “ဟု ထပ်မံပြော ဆိုသည်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၉-သောင်းကျော်နှင့် သေဆုံးရသူ ၂-ထောင်ကျော်ရှိနေသော ဖိလစ်ပိုင်တွင် လွန်ခဲ့သည့် မတ်လကတည်းက မျက်နှာဖုံးများ မဖြစ်မနေ ၀တ်ဆင်ကြရန် လိုအပ်ချက်ဖြစ်လာသည်။ သောကြာနေ့ တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ အများဆုံး ထပ်မံတွေ့ရှိရခြင်းသည် အရှေ့တောင်အာရှ၌ ဒုတိယအကြိမ် အများဆုံး အရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတအနေဖြင့် ရောဂါပြန့်ပွားမှုထိန်းချုပ် ရန် ကန့်သတ်ချက်များ ကို တိုးချဲ့ခဲ့ရပြီး လာမည့် ဒီဇင်ဘာလတွင် ပုံမှန်ပြန်လည်ရောက် ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိပြု သည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတို့ကမူ ဓါတ်ဆီ မှာ ရှူရှိုက် မိလျှင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် အတွက် ပိုးသတ်ဆေး အဖြစ် သုံးစွဲနိုင်ခြင်း မရှိဟုဆိုကာ သမ္မတဒူတာတီး၏ မျက်နှာဖုံးသန့်ရှင်းရေး အကြံပြုချက် ကို ထောက်ခံခြင်း မရှိကြောင်း ဖိလစ်ပိုင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌက Reuters အား ပြောဆိုသည်။
ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင် သည့် အ၀တ်မျက်နှာဖုံးများ ကို ဆပ်ပြာနှင့် ရေအသုံးပြု ၍ သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်နို င်ကြောင်း ၊ အီသိုင်း ၇၀% ပါသော အရည် သို့မဟုတ် အိုင်ဆိုပရိုပိုင်းလ် အယ်လ်ကိုဟော အရည်ဖြင့် ကောင်းစွာ ပိုးသတ်နိုင်ကြောင်း ကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်သူ တို့က ရှင်းပြသည်။
မျက်နှာဖုံးများ သန့်ရှင်းရေး တွင် ဓာတ်ဆီသုံးရန် ပထမ အကြိမ်အကြံပြုစဉ် ကတည်းကပင် ဒူတာတီးက လူအများ ဒုက္ခရောက်အောင် ဂျောက်တွန်းခြင်း သက်သက်သာဖြစ်ပြီး လက်တည့် မစမ်းကြရန် သမ္မတ၏ နိုင်ငံရေး ပြိုင်ဘက် အချို့ က ကန့်ကွက်ခဲ့ကြ သည် ။
အွန်လိုင်းအချက်အလက်စစ်ဆေးရေးမှတ်ချက်။ ဓါတ်ဆီနှင့်ဒီဇယ်ဆီတို့မှာ ပိုးသတ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း မရှိ ။ OungMarine
မကျြနှာဖုံး Mask မြားသနျ့ရှငျးရေး ပွုလုပျရာ တှငျ ဓါတျဆီသုံး သငျ့ကွောငျး ဖိလဈပိုငျ ဒူတာတီး အကွံပွု။ ရယျစရာပွော တာ မဟုတျဟု လညျးဆို။ ဆေးပညာကြှမျးကငျြသူ တို့ သဘော မတူ ။ ဓါတျဆီနှငျ့ ဒီဇယျဆီ တို့မှာ ပိုးသတျရာ တှငျ အသုံးပွုနိုငျခွငျး မရှိ ။
သွဂုတျ – ဝ၂ ၊ ၂ဝ၂ဝ
ဖိလဈပိုငျပွညျသူတို့ အနဖွေငျ့ ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈ ကာကှယျရေး Mask မကျြနှာဖုံးမြား ကို ပိုးသတျရာ တှငျ ဓါတျဆီ ကို အသုံးပွု သငျ့ကွောငျး သမ်မတရိုဒရီဂို ဒူတာတီးက ဘှငျးဘှငျးကွီး တိုကျတှနျး လိုကျပွီး ရယျစရာပွောနခွေငျး မဟုတျကွောငျး ကိုလညျး အလေးအနကျ ပွောဆိုသညျ ဟု Reuters က ယနရေ့ေး သားသညျ။
မကျြနှာဖုံးမြား ကို သနျ့ရှငျးရေးပွု လုပျရာတှငျ ပိုးသတျဆေး အလှယျတကူ မရရှိပါက ဓါတျဆီအသုံးပွုသငျ့ကွောငျး လှနျခဲ့ သညျ့ ရကျသတ်တပတျ ၌ သမ်မတ ဒူတာတီးက ပွောဆိုခဲ့ဖူးသညျ။ သမ်မတ၏ ပွောရေးဆိုခှငျ့ ရှိသူကမူ ဒူတာတီးအနဖွေငျ့ ရယျစရာပွောခွငျးဖွဈကွောငျး၊ သမ်မကွီးမှာ မကွာခဏ ပွကျလုံးထုတျလရှေိ့သညျကို အမြားသိဖွဈကွောငျး ခပြေပွောဆို ခဲ့သညျ ။
သောကွာနေ့ ရုပျသံ မှ တဈဆငျ့ မိနျ့ခှနျးပွောကွားရာ တှငျမူ သမ်မတဒူတာတီးက “ ကြှနျတျော တကယျပွော တာပါ ၊ ဓါတျဆီဆိုငျ ကို သှား၊ ဓါတျဆီနညျးနညျး ဝယျ၊ မကျြနှာဖုံးတှေ အတှကျ ပိုးသတျဆေး ရပါပွီ “ ဟု ပွောဆိုပွီး “ ရယျစရာပွောနေ တယျ ထငျကွလား၊ တကယျပွောတာပါ ၊ ရယျစရာ လုပျထာ မဟုတျပါဘူး “ဟု ထပျမံပွော ဆိုသညျ။
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျခံရသူ ၉-သောငျးကြျောနှငျ့ သဆေုံးရသူ ၂-ထောငျကြျောရှိနသေော ဖိလဈပိုငျတှငျ လှနျခဲ့သညျ့ မတျလကတညျးက မကျြနှာဖုံးမြား မဖွဈမနေ ဝတျဆငျကွရနျ လိုအပျခကျြဖွဈလာသညျ။ သောကွာနေ့ တှငျ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျခံရသူ အမြားဆုံး ထပျမံတှရှေိ့ရခွငျးသညျ အရှတေ့ောငျအာရှ၌ ဒုတိယအကွိမျ အမြားဆုံး အရအေတှကျဖွဈသညျ။ ဖိလဈပိုငျသမ်မတအနဖွေငျ့ ရောဂါပွနျ့ပှားမှုထိနျးခြုပျ ရနျ ကနျ့သတျခကျြမြား ကို တိုးခြဲ့ခဲ့ရပွီး လာမညျ့ ဒီဇငျဘာလတှငျ ပုံမှနျပွနျလညျရောကျ ရှိမညျဖွဈကွောငျး ကတိပွု သညျ။
ဆေးဘကျဆိုငျရာ ကြှမျးကငျြသူတို့ကမူ ဓါတျဆီ မှာ ရှူရှိုကျ မိလြှငျ အန်တရာယျဖွဈစသေညျ့ အတှကျ ပိုးသတျဆေး အဖွဈ သုံးစှဲနိုငျခွငျး မရှိဟုဆိုကာ သမ်မတဒူတာတီး၏ မကျြနှာဖုံးသနျ့ရှငျးရေး အကွံပွုခကျြ ကို ထောကျခံခွငျး မရှိကွောငျး ဖိလဈပိုငျဆေးဘကျဆိုငျရာအစညျးအရုံး ဥက်ကဋ်ဌက Reuters အား ပွောဆိုသညျ။
ပွနျလညျအသုံးပွုနိုငျ သညျ့ အဝတျမကျြနှာဖုံးမြား ကို ဆပျပွာနှငျ့ ရအေသုံးပွု ၍ သနျ့ရှငျးရေး ပွုလုပျနို ငျကွောငျး ၊ အီသိုငျး ၇၀% ပါသော အရညျ သို့မဟုတျ အိုငျဆိုပရိုပိုငျးလျ အယျလျကိုဟော အရညျဖွငျ့ ကောငျးစှာ ပိုးသတျနိုငျကွောငျး ကနျြးမာရေး ကြှမျးကငျြသူ တို့က ရှငျးပွသညျ။
မကျြနှာဖုံးမြား သနျ့ရှငျးရေး တှငျ ဓာတျဆီသုံးရနျ ပထမ အကွိမျအကွံပွုစဉျ ကတညျးကပငျ ဒူတာတီးက လူအမြား ဒုက်ခရောကျအောငျ ဂြောကျတှနျးခွငျး သကျသကျသာဖွဈပွီး လကျတညျ့ မစမျးကွရနျ သမ်မတ၏ နိုငျငံရေး ပွိုငျဘကျ အခြို့ က ကနျ့ကှကျခဲ့ကွ သညျ ။
အှနျလိုငျးအခကျြအလကျစဈဆေးရေးမှတျခကျြ။ ဓါတျဆီနှငျ့ဒီဇယျဆီတို့မှာ ပိုးသတျရာတှငျ အသုံးပွုနိုငျခွငျး မရှိ ။ OungMarine
ထောင်ချောက်ဆင် ဗျောက်အိုးထည့်ထားတဲ့ နာနတ်သီးကို စားသုံးမိလို့ အချိမဆံ့ သေပွဲဝင်ခဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ ဆင်မကြီး
Si Quey တကယ် လူသားစားခဲ့ သလား…? ဝင်းနဲ့ဇော်ရော လွတ်မြောက်ပါ့မလား…..?
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ၏ ၃ ပုံ ၁​ ပုံခန့် ရေဘေးဒဏ် ခံနေရကာ လူပေါင်း ၁ သန်းကျော်ရေလွတ်ရာ ကို ထွက်ပြေးနေရ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပွားမှု ကနဦးစပိုင်းကထဲက ဗိုင်းရပ်စ် နမူနာများကို ဖျက်ဆီးခဲ့ဟု တရုတ် ၀န်ခံလိုက် …